Ethiopia: In kabadan 60 sarkaal oo xabsiga loo taxaabay • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / World News / Ethiopia: In kabadan 60 sarkaal oo xabsiga loo taxaabay
November 13, 2018 - By: Abdirisak Faamoos
Dowlada Ethiopia ayaa isniintii shalay xabsiga dhigtay In kabadan 60 sarkaal oo la tuhunsan yahay in ay qeyb ka ahaayeen tacadiyo iyo xadgudubyo ka dhacay dalka Ethiopia sida uu warbaahnta gudaha u sheegay xeer ilaaliyaha dalka Ethiopia Berhanu Tsagaye.
Berhanu ayaa tilmaamay in xariga saraakiishan tacadiga geystay uu yimid kadib baaritaano shan bilood qaatay oo lagu ogaaday in ay dadkan la xiray ay qeyb ka ahaayeen xadgudubyadii sanadihii lasoo dhaafay loo geysanayay dad aan waxba galabsan.
36 kamid ah xubnaha la xiray ayaa loo haystaa in ay falal xadgudubyo ah kula kaceen maxaabiis loo xiray arimo la xiriira argagixisinimo iyo kuwo loo xiray kicin qowmiyadeed waxaana saraakiil kale oo gaaraya 27 xubnood iyana loo xiray musuq maasuq sida uu sheegay Mr. berhanu.
Waxa uu sheegay in dhawaan xubnahan kiisaskooda loo gudbin doono maxkamada kadib mar ay maraan baaritaano intaa ka badan si look ala cadeeyo heerka dambiyada ay galeen xubnahan la xiray.
Tan iyo intii uu xilka la wareegay Ra’iisul wasaare Abiy Ahmed waxaa uu qaaday talaabooyin uu wax uga qabanayo tacadiyada ka dhan ka ah bini aadantinimada oo ay horey hay’adaha u dooda xuquuqda aadanaha ugu eedeyn jireen dowlada Ethiopia in ay ku kacdo falal ka dhan xuquuqda aadanaha.